IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ifumana iPie ye-Android ngokuzinzileyo | I-Androidsis
I-Android Pie iyaqhubeka nokwanda kwayo kwintengiso. Ngoku kukujika kweRedmi Qaphela 6 Pro, yenye yeemodeli ezibalaseleyo phakathi kuluhlu lweXiaomi. Ifowuni, kwiinyanga ezidlulileyo zafika ngokusemthethweni eSpain, Sesinye sezixhobo ezisebenza kakuhle kweli candelo lomenzi waseTshayina. Ngoku, ufumana olu hlaziyo ngokusemthethweni.
Ezi veki bezizele lutshintsho malunga nohlaziyo. Ukusukela iXiaomi irhoxisile ukukhutshwa kwePie ye-Android ezinye iimodeli ngaphakathi kuluhlu lweRedmi. Ngethamsanqa, le Redmi Qaphela i-6 Pro yayingekho kuluhlu oluchaziweyo, kwaye ngoku unokufikelela kolo hlaziyo.
Emva kweenyanga zovavanyo ngohlobo lwe-beta, i Inguqu ezinzileyo ye-MIUI 10.3.2 esekwe kwiPie ye-Android yomnxeba. Kukhutshwa kuzo zombini iinguqulelo zefowuni, kuxhomekeke kwi-RAM yayo. Kuba sifumana iinguqulelo zale Redmi Qaphela i-6 Pro ene-3 okanye i-4 GB ye-RAM. Bonke bafumana uhlaziyo.
Ngaphandle kokuhlaziywa, i-interface ayitshintshi kangako kwisixhobo. I-MIUI igcina ukubonakala okufanayo nangona i-Android Pie isungulwe. Inxalenye elungileyo kukuba sifumane ukusebenza okungcono kunye nozinzo kwisixhobo. Into ebaluleke kakhulu kubasebenzisi.
Kunye nolu hlaziyo, iRedmi Qaphela i-6 Pro ifumene indawo yokhuseleko ngo-Epreli, eyona yakutshanje kwintengiso ukuza kuthi ga ngoku. Ikwakhuselwe kwizisongelo. Ubunzima bohlaziyo yi-1,7 GB, kwaye iyanda kulo lonke elaseYurophu, i-Italiyane iyeyona ntengiso yokuqala ukuba nayo.
Ke ngoko, abasebenzisi baseSpain ngeRedmi Qaphela 6 Pro Abayi kulinda ixesha elide de babe ne-Android Pie kumnxaba. Iindaba ezimnandi kubo bonke abo babelinde uhlaziyo kumbindi ophakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro yokuhlaziya kwi-Android Pie